မြန်မာနိုင်ငံရှိကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းဥပဒေများ| HowToUse AbortionPill
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဆေး အသုံးမပြုခင်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဆေးကို ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲဆေးအသုံးပြုပြီးနောက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ 10 ပတ်မှ 13 အတွင်း ဆေးဖြင့်ဖျက်ချခြင်း
နိုင်ငံအလိုက် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမှုနှင့်ဆိုင်သည့် ဥပဒေများ
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဆေးနှင့် ပတ်သတ်ပြီးမေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းဘလော့ဂ်
နိုင်ငံအလိုက် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမှုနှင့်ဆိုင်သည့် ဥပဒေများအင်တာနက်သင်ကြားရေ
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေမျာ
မိခင်အသက်ကို မဖြစ်မနေ ကယ်တင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အခြေအနေကလွဲလို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချတာကို တင်းကြပ်စွာ တားမြစ်ထားပါတယ်။ သားပျက်သားလျှောဖြစ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို ပြန်လည်ကုသဖို့ အတွက် အခြေခံအဆင့်နဲ့ ပြည်နယ်တိုင်းအဆင့်မှာ လုပ်ဆောင်လို့ရပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၀ ကနေ ၃၀၀ အတွင်း ကုန်ကျနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချတာက မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရားဝင်ပါသလား။
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချတာက မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရားမဝင်ပါဘူး။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ အမျိုးသမီးတွေကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ ဥပဒေတစ်ရပ်အနေနဲ့ ပါဝင်တဲ့ တစ်ချက်ကတော့ ရှိပါတယ်။
အမျိုးသမီးတစ်ဦးက အဓမ္မကျင့်ခံရလို့ ရလာတဲ့ကိုယ်ဝန်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ ကြီးကြပ်ပေးတဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ဆီကို ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဖို့ တင်ပြပြီး ဘုတ်အဖွဲ့က ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါက ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချလို့ ရပါတယ်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ လူတစ်ယောက်က အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချပေးတာ၊ အမျိုးသမီးကိုယ်တိုင်က မိမိဖာသာ ဖျက်ချတာတွေက ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်ထပ်ပိုသော ဒါမှမဟုတ် ငွေဒဏ် ကို ပြစ်ဒဏ်အဖြစ် ချမှတ်ခံရနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချပေးသည့် ဆရာဝန်သည် ဆေးကုသခွင့်လက်မှတ် ရုတ်သိမ်းခံရတဲ့အထိ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရနိုင်ပါတယ်။ 2
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြုလုပ်ကြတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချတဲ့ဝန်ဆောင်မှုများရဲ့ ကွာခြားချက်က ဘာလဲ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ခွဲစိတ်ပြီး ဖျက်ချတာ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျစေနိုင်တဲ့ ဆေးပေးပြီး ဖျက်ချတာ နှစ်မျိုးလုံး ပြုလုပ်ကြပါတယ်။
သားပျက်သားလျှောဖြစ်တာကို စောင့်ရှောက်ကုသပေးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုက အစိုးရဆေးရုံတွေက ရရှိနိုင်ပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချလို့ ဒါမှမဟုတ် သားပျက်သားလျှောဖြစ်လို့ ကုသမှု ခံယူရတာက မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ကဲ့ရဲ့ ခံရစရာဖြစ်လို့ အမျိုးသမီးအများစုက ဒီဝန်ဆောင်မှုကို အလွယ်တကူ ရယူဖို့အတွက် စိန်ခေါ်မှုတွေကတော့ ရှိနေစဲဖြစ်ပါတယ်။3
သားပျက်သားလျှောဖြစ်ခဲ့လို့ စောင့်ရှောက်ကုသမှုကို မြန်မာနိုင်ငံ ဘယ်နေရာတွေမှာ တရားဝင်ရယူနိုင်သလဲ။
မြန်မာနိုင်ငံ အောက်ပါနေရာများတွင် သားပျက်သားလျှောကုသမှု ခံယူနိုင်ပါတယ်။4
မယ်ရီစတုပ် အင်တာနေရှင်နယ် (Marie Stopes International) နှင့် အိုင်ပက်စ် (Ipas) တို့လို အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး လုံလောက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေ ရရှိစေရန် သင်တန်းပေးတာတွေ လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေ ရရှိစေရန် လုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဖို့အတွက် တရားဝင် ဝန်ဆောင်မှု ဘယ်မှာ ရနိုင်သလဲ။
အရည်အသွေးပြည့်မီတဲ့ သားပျက်သားလျှော ပြုစုကုသတဲ့ ဝန်ဆောင်မှု ရရှိစေရန်အတွက် လိုအပ်တဲ့ အစီအစဉ်တွေ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေ ဆွေးနွေးလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာက ၂၀၁၅ ခုနှစ် သားပျက်သားလျှောကုသခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ သားပျက် သားလျှောဖြစ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို ပြန်လည်ကုသဖို့ အတွက် အခြေခံအဆင့်နဲ့ ပြည်နယ်တိုင်းအဆင့်မှာ လုပ်ဆောင်လို့ရပါတယ်။5
Safe Abortion ကဲ့သို့ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဖို့ အတွက် ကုန်ကျစရိတ်ဘယ်လောက်ရှိနိုင်သလဲ။
လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ ဆေးရုံဆေးခန်း ဝန်ဆောင်မှုအပေါ်မူတည်ပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၀ ကနေ ၃၀၀ လောက်ထိကုန်ကျနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရနိုင်တဲ့ ဆေးဝါးတွေက ဘာတွေလဲ။
မီဆိုဖမ်း (Miso-Fem) အမှတ်တံဆိပ် မီဆိုပရိုစတော (Misoprostol) သာရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုဆေးဝါးတွေကို ဘယ်မှာ ဝယ်လို့ရနိုင်လဲ။
မီဆိုပရိုစတော (Misoprostol) ကို ဆေးဆိုင်တွေမှာ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆေးဝါးတွေက ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချတာ ဒါမှမဟုတ် သားပျက်သားလျှောကုသတဲ့နေရာ အပြင် တခြားကုသနိုင်တဲ့ ရောဂါတွေ ရှိပါတယ်။
လွယ်လွယ်ကူကူဝယ်နိုင်တဲ့ အမှတ်တံဆိပ်ကတော့ Miso-Fem တံဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးကဒ်ပုံပြရန်
သားပျက်သားလျှောနှင့် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချတာတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ပိုမိုသိလိုလျှင် ဘယ်မှာ စုံစမ်းလို့ ရနိုင်မလဲ။
Pathﬁnder International – မြန်မာနိုင်ငံရှိ မိသာစုနှင့် အမျိုးသမီးများအတွက် အရည်အသွေး ပြည့်ဝတဲ့ မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်။
Mae Tao Clinic – ထိုင်းမြန်မာ နယ်စပ်ရှိ တိုင်းရင်းသားများအားလုံးအတွက် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုတွေ မြှင့်တင်ဖို့အတွက် သင်တန်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။
Gender Equality Network: – ကျားမရေးရာတန်းတူညီမျှမှုနှင့် အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးအတွက် ဆောင်ရွက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသည်။
Tel: +95942114 4394
“Prevention and Protection of Violence Against Women Bill.” Alliance for Gender inclusion in the peace process. https://www.agipp.org/en/issuesaffectwomen/prevention-and-protection-violence-against-women-bill
“Abortion Law: Myanmar”. Women on Waves. https://www.womenonwaves.org/en/page/4884/abortion-law–myanmar
“Six in ten maternal deaths from botched abortions in Yangon Central Women’s Hospital in Myanmar.” Safe abortion womens right. https://www.safeabortionwomensright.org/six-in-ten-maternal-deaths-from-botched-abortions-in-yangon-central-womens-hospital-in-myanmar/
“Integration of Post-Abortion Care: The Role of Township Medical Officers and Midwives in Myanmar.” Taylor and Francis Online. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1016/S0968-8080%2803%2902170-0
“Post Abortion Care Reference Manual.” Ministry of Health, Department of public health -maternal and reproductive health division. https://abortion-policies.srhr.org/documents/countries/03-Myanmar-Post-abortion-care-reference-manual-2015-Ministry-of-Health.pdf